ग्रहणअगाडि हल्लाखोरले काम पाए : धन्दा नमान्नुस्, मोबाइल टिभी अन राखे पनि केही हुन्न – MySansar
सोमबार राति चन्द्रग्रहण लाग्नुअगाडि हल्लाखोरहरुले काम पाए- सिंगापुर टेलिभिजनका अनुसार, आज राती १२:३० बजेदेखि ३:३० बजेसम्म हाम्रो ग्रह अति नजिक हुनेछ र विकिरण निस्कने भएकोले मोबाइल, टिभी लगायत अन्य दुरदर्शक यन्त्रहरु बन्द गरी आफनो शरिरबाट टाढै राख्न अनुरोध गरेको छ।
अझ रक्षा बन्धनमा बाँधिएको डोरो नफुकाले मर्नेसमेत अफवाह फैलाइए। यस्ता अफवाहपूर्ण सन्देश एसएमएस र फेसबुकमार्फत् फैलिएको छ। तर धन्दा नमान्नुस्, यो अफवाह मात्रै हो। मोबाइल, टिभी अन राखे पनि केही हुन्न। डोरो बाँध्दैमा केही हुने हैन। हरेक ग्रहणमा यस्तो अफवाहहरु फैलाउने काम हुन्छ।
हावा कुरा सिंगापुरको टेलिभिजनले किन प्रसारण गर्नु। प्रसारण गर्नुपरे बीबीसी, सिएनएनले गर्लान् नि। अझ त्यस्ता सन्देशमा गुगल चेक गर्नु पनि भनिएको रहेछ-
ल ठीकै छ, गुगल सर्च गरौँ न त। गुगलमा Cosmic rays hoax टाइप गरेर सर्च गर्नुस्, लगभग ३९४,००० नतिजाहरु देखिनेछन्। त्यसमा प्रष्ट हुन्छ यो खाली अफवाह मात्रै हो।
स्नूप्सका अनुसार यस्तो हल्ला वर्षौँअघिदेखि चलिरहेको छ तर यसको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन।
अझ चेक बीबीसी पनि भनेको छ हैन? ल हेर्नुस् बीबीसीमा के छ?
अझै पनि कसैले यस्तो हल्ला तपाईँलाई फैलाउन खोज्दैछ भने उसलाई बेस्कन हपार्नुस् र सत्य बताउनुस्। तपाईँ हामीले हल्लालाई फैलन रोक्न गर्नसक्ने यति नै हो।
1 thought on “ग्रहणअगाडि हल्लाखोरले काम पाए : धन्दा नमान्नुस्, मोबाइल टिभी अन राखे पनि केही हुन्न”
त्यहि भएर त मा संधै भन्छु, गोबर सोहोर्ने हातमा अत्याधुनिक प्रबिधि थमाई दिए पछि misuse त हुने नै भयो. हा हा